I-Mugen Train Yenze ama- $ 352 Million Dollars, Umbhali Wenze i- $ 19,201 - Okunye
I-Mugen Train Movie Yenze ama- $ 352 Million Dollars, Umbhali Wakhokhelwa u- $ 19,201
Idimoni Slayer: Mugen Train yi-movie ye-anime enenani lokusangana lempumelelo. Ikakhulukazi esikhathini esifushane.
Kungakapheli izinsuku ezintathu kuvulwe kumatiyetha, yenze imali engaphezulu kwama- $ 40 million dollars.
Sekukonke, i-Mugen isitimela movie wenza phezu $ 352 wezigidi zamaRandi. Kwenza kube yi-movie ye-anime ephezulu kakhulu ethengisa isikhathi sonke.
Kodwa ngezansi kobuso isithombe asibukeki kahle njengoba sizwakala.
UKoyoharu Gotouge, umbhali wesifazane nombhali weDemon Slayer uthole kuphela u- $ 19K kulesi sivumelwano.
Inani okufanele ubongwe ngalo, yebo, kodwa empeleni inani elingahloniphi lika imali ngempumelelo ebuya kuDemon Slayer.
Ikakhulukazi lapho kukhulunywa ngakho Impumelelo kaMugen Train ngokuqondene.
Manje kungani umbhali weDemon Slayer ‘akhokhelwa ngokuqhathaniswa okuncane?
Njengoba kuchazwe nguCrunchyroll:
“USugimoto uchaze lokho ngoba Idimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba kungumsebenzi wokuqala we-serial we-Gotouge, babonwa njengombhali omusha, ngakho-ke ukukhokhwa kwangaphambili kokusetshenziswa komsebenzi wamalungelo waseshashalazini kungaphansi kwehle ngokumangazayo.
Ukwengeza kulokho, ngokusho kukaSuimoto, Mugen Isitimela kunqunywe kuphela ukuba yifilimu ngenkathi kusakazwa kuqala i- Idimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba Uchungechunge lwe-TV anime, ukuthandwa kwe-franchise bekungekho phezulu njengoba kunjalo manje.
Zombili lezi zici zombili zisho ukuthi, iningi, uShusimoto ulinganisela ukuthi imali enikezwe uShuisha ngamalungelo endaba yayizungeze ama-yen ayizigidi ezingama-4 kuphela ($ 38,372), enama-yen ayizigidi ezimbili kuphela ($ 19,201) eya eGotouge ngqo ukukhishwa kwetiyetha . ”
I- kwangempela inkinga esakazekile nabalobi bama-manga eJapan
Ababhali bamaManga nabanikazi bamalungelo okushicilela eJapan abaceli imali eyanele.
Indlela uhlelo olusethwe ngayo yenza lokho kube yinselelo, kunjalo. Kepha kuyangimangaza ukuthi abaningi abahlanganisi futhi bafuna inhlawulo ngomsebenzi wabo. Ukuthi athathwa njengombhali “omusha” noma cha.
Imali engaphambili ibukeka iyinhle, kepha imali yesikhathi eside inambitha kangcono futhi ihlala iyindlela engcono.
Esimweni esinjalo, Umbhali wamademoni uSlayer ngumbhali omusha ngakho-ke leyo yingxenye yesizathu sokuthi akhokhelwe kancane. Futhi angitholanga amalungelo amaningi.
Izinkampani embuzweni bebengazimisele ukuyibeka engcupheni njengoba umbhali engenawo umlando wokukhuluma. Futhi lokho kulungile.
Kepha empeleni, kungenxa yokuthi ababhali abazi okungcono ngokujwayelekile. Noma bengafuni ukudala inkinga.
Ngemuva kwakho konke - bakwenzela uthando, hhayi imali. Kepha nguziphi izindleko umbuzo okufanele uwubuze.
Ababhali bamaManga njengoba ngike ngasho phambilini, kufanele bakhe ipulatifomu yabo. I-intanethi ibanikeza amandla uma benama-manga amahle.
Ngaleyo ndlela, banga:
Funa amaroyalithi aphezulu (noma amaroyalthi nhlobo).
Xoxa ngezinkontileka ezingcono.
Wina amadili angcono.
Futhi ube nokulawula okuningi ngenqubo.
Ukuba nesikhulumi kukunika amandla, okwenza wonke umuntu eze wena. Ukubeka esimweni samandla.
Leyo yimicabango yami ngenani IKoyoharu Gotouge wakhokhelwa vs inani the Mugen isitimela movie eyenziwe isiyonke.
I-Porn Star Lacey London Ithi Uchitha Isikhathi Sakhe Esiningi Ebuka I-Anime!
Intombazane eneminyaka engu-16 ubudala yase-Asia egqoke ihembe elihlaza okwesibhakabhaka le-Anime Isilahlekile E-Springfield Lakes, e-Australia